အလွန်အကျွံစားသည် 2, ကလေးများနှင့်အတူပျော်မွေ့ရန်ပျော်စရာသမဝါယမဂိမ်း | ငါက Mac ကပါ
အလွန်အကျွံစားသည် 2, ကလေးများနှင့်အတူပျော်မွေ့ရန်ပျော်စရာသမဝါယမဂိမ်း
သင် PS4 အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါက Sony က PlayStation Plus မှတဆင့်လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကပူးပေါင်းခဲ့သောဂိမ်း Overcooked! ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည့်ကစားနည်းနှင့်ချက်ပြုတ်ထားသောချက်ပြုတ်နည်းများဖြစ်နိုင်သည်။ ငါတို့သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များတောင်းဆိုသောဟင်းလျာများကိုအသင့်ပြင်ဆင်ထားရန်
ဒီခေါင်းစဉ်ကို PC နဲ့ Xbox နှစ်ခုစလုံးအတွက်ရရှိနိုင်ပေမယ့် macOS အတွက်မရရှိနိုင်ပါ။ သို့သော်ဤပထမခေါင်းစဉ်၏အောင်မြင်မှုကြောင့် developer သည် macOS ကိုလည်းရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပျော်စရာခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Mac မှခံစားနိုင်တော့မည်ဆိုပါက၎င်းသည်စိန်ခေါ်မှုများကိုအတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကို pose ။
Overcooked! ၂။ ဆူရှီ၊ ကိတ်မုန့်၊ ဘာဂါနှင့်ပီဇာတို့ပါဝင်သည့်အရှိန်မြင့်ဆုံးသောအာခေါင်များ၊ ချက်ပြုတ်နည်းအသစ်များကိုချက်ပြုတ်ရန်ကမ္ဘာကြီးကိုကျွန်ုပ်တို့ခရီးသွားရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများနှင့်အတူ coronavirus ပြန့်ပွားမှုကိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့ခံစားနေရသောဤထောင်ချောက်အတွင်းဤခေါင်းစဉ်သည်၊ ကလေးငယ်များနှင့်ပျော်စရာအချိန်များရှိသည်.
Overcooked များအတွက်လိုအပ်ချက်များ! နှစ်
SO MacOS 10.12.6 MacOS 10.13.1
Processor ကို 2.7 GHz အမြန်နှုန်း Intel Core i5 3.1 GHz အမြန်နှုန်း Intel Core i5
Memoria RAM 4GB RAM ကို 8 GB အထိ
ဂရပ် Nvidia GeForce GT 640M AMD Radeon Pro 560 / Nvidia GeForce GTX 780m
သိုလှောင်မှု hard disk နေရာ3GB hard disk နေရာ3GB
Overcooked2မှာယူအက်စ် ၂၂.၉၉ ပါ။ အကယ်၍ Mac အပြင်ကျွန်ုပ်တို့မှာ Windows PC ရှိတယ်၊ ဒီခေါင်းစဉ်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ငါတို့မှာ Overcooked 1 နဲ့ Overcooked2တို့ပါ ၀ င်ပြီးယူရို ၃၅.၀၈ အတွက်သာပါရှိပါတယ်။
Steam ရဲ့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဝယ်လိုက်ရင်၊ ငါတို့ရှိသမျှသည်ပလက်ဖောင်းများအတွက်လုပ်ပါဆိုလိုသည်မှာ၎င်း operating system နှစ်ခုအတွက် version ကိုရရှိနိုင် သ၍ ၎င်းကို PC, Mac သို့မဟုတ် Linux မှစီမံခန့်ခွဲထားသောကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » အလွန်အကျွံစားသည် 2, ကလေးများနှင့်အတူပျော်မွေ့ရန်ပျော်စရာသမဝါယမဂိမ်း
Pixelmator Pro ကိုအဓိကတိုးတက်မှုများစွာဖြင့်အဆင့်မြှင့်ထားသည်
ဤသည်အနက်ရောင်အတွက် AirPods ပါလိမ့်မယ်